ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦးနှိပ်စက်ခြင်းရှိသည်? ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုအသိပေးလုပ်နည်းင်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 11 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
ငါတို့ရှိသမျှသည်အကကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီ, သင်တို့ကိုဧည့်ခန်းကိုဖြတ်ပြီးမှသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ကြည့်ရှု့တဲ့အခါသင့်ရဲ့အစာအိမ်အတွက်လိပ်ပြာ; သင်သည်သင်၏အချစ်နဲ့အတိတ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်လှေကားအတွက်အနီးကပ်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏တည်သည့်အခါအသက်ရှုမဝြခင်​​းခြင်း; သင့်ရဲ့လက်နက်ရုပ်ရှင်ပြဇာတ်ရုံ၌တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်အမှီလိုက်တဲ့အခါတိုးမြှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း. ယင်းတို့သည်သင်တစ်စုံတစ်ဦးပြုတ်ကျသမျှသောအချက်ပြလှိုင်းများမှာ. ဒီကိုအသိအမှတ်ပြုလွယ်ကူပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသိတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပိုပြီးရှုပ်ထွေး. ဒီနေရာတွင်ချစ်ကြည်ရေး ကျော်လွန်. ခံစားချက်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းသင့်အချစ်နဲ့မှအရိပ်အမြွက်ရန်နှင့်သူတို့အတူတူခံစားရလျှင်ထွက်ရှာဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်.
အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့နက်ရ​​ှိုင်းစွာသက်ဝင်သက်ကို ယူ. သို့မဟုတ်ကိုတိုက်ရိုက်သူမ၏ဖို့ပဲဖိတ်ရန်ဖြစ်သည်. Just setatime when you can get your crush alone and tell him or her your true feelings and ask if they feel the same. သင့်အနေဖြင့်လိုင်းပေါ်မှာအားလုံးထွက်တင်သောနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုချက်ချင်းပယ်ချအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက် setting လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုချွတ်ကအားလုံးကိုရရှိရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဤနည်းလမ်းကို Self-လေးစား၏ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကြာ, သို့သော်. If you are notaself-confident superhero, ဖြစ်ကောင်းတဲ့ပိုပြီးပါးနပ်သောချဉ်းကပ်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်.
အပရောပရည်လုပ်ခြင်း Factor တျကိုတိုးပှား
မိတ်ဆွေတစ်ဦးထက် ပို. ဖြစ်လာမိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထွက်ခံစားရရန် A ကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သင့်ချစ်ခင်စုံမက်၏အရာဝတ္ထုနှင့်အတူ flirtier ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်. အများကြီးပြုံး, မျက်လုံးချင်းစာရေးအောင်, an occasional wink, and quick, ပုဂ္ဂလိကကြည့်တဲ့လူမှုရေး setting ကိုတွင်သင်သည်ထိုသူတို့ကတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအာရုံစိုက်သင့်အချစ်နဲ့သိမ်မွေ့သောနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အခါ. သင်သည်အခြားသောလူမျိုးကိုစိုးသင့်အချစ်နဲ့အထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ပါကသင်သည်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏များအတွက်အထူးခံစားချက်တွေကိုရှိသည်ကြောင်းကိုသင်၏အချစ်နဲ့ပြသ.
တက်လှမ်းရန်နှင့်သင့်အချစ်နဲ့ထိကိုင်ဖို့သင်သည်တတ်နိုင်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုယူ. မလုပ်ပါနှင့်, ငါသည်သူတို့၏အာကာသကျူးကျော်နှင့်သူတို့မသက်မသာခံစားရအောင်ဆိုလိုdonít. သင်သည်စကားပြောဆိုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအဖြစ်သူတို့၏လက်ရုံးတော်ကိုသို့မဟုတ်လက်ထိကိုင်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ယူအခွင့်အလမ်းများ. နှုတ်ဆက်ပြောဆိုလျက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့အခါသင့်ရဲ့အချစ်နဲ့တစ်ဦးပွေ့ဖက်ပေးပါ. သူတို့နှင့်အတူနောက်နေသည့်အခါတစ်ဦး flirty လမ်းမှာသူတို့ကိုနေစဉ်သူတို့သည်သင့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြကြသောအခါအနီးကပ်အမှီမပြု. Increased physical contact isagood way to drop hints that you would like to be closer to him or her, both relationship-wise, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ.
သူတို့တစ်တွေဆံပင်ညှပ်ရတဲ့အခါသင့်ရဲ့အချစ်နဲ့ complimenting Start သို့မဟုတ်anice မတ်မတ်ဝတ်ဆင်. This will not only make your crush feel better about themselves but will also let them know you think they are attractive. သင့်ရဲ့အချစ်နဲ့အရေးပါသောပြဿနာဆြေးြေိံးနေတဲ့အချိန်မှာဟာသသ​​ို့မဟုတ်ìyouဒါsmartîဖြစ်ကြသည်ကိုမူသောအခါìyouတူမှတ်ချက်များhumorî၏ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောသဘောရှိသည် Making သင့်အချစ်နဲ့တကယ်သူတို့ကိုကဲ့သို့သင်တို့သိစေခြင်းငှါကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏.
အဘယ်သူမျှမကနည်းဗျူဟာ foolproof ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကအရိပ်အမြွက်ရdonítလျှင်သင့်အချစ်နဲ့သင့်ခံစားချက်တွေကိုပြောပြပြားချပ်ချပ်သင်နေဆဲထွက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင့်အချစ်နဲ့သင့်အကြောင်းမည်သို့ခံစားရ၏ပိုကောင်းတဲ့သဘောရကူညီနိုင်. ဤနည်းပရိယာယ်မဆိုနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့crushísတုံ့ပြန်မှုများကိုဖတ်ရှုဖို့အရေးကြီးသည်. သူတို့အရှက်သို့မဟုတ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရတဲ့ဖြင့်သင်၏ထင်မြင်ချက်များသို့မဟုတ်အပြုအမူတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့သင်နှင့် ပတ်သက်. တူညီသောခံစားdonítနေကြတယ်. သူတို့ကပိုပရောပရည်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူပရောပရည်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်, သူတို့ကလည်းသင်တို့အပေါ်မှာကြိတ်ခွဲတဲ့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်.